Arrimaha Baarlamaanku Ay Muhiimadda Saari Doonaan Kalfadhiga Afaraad Ee Maanta Furmaya – Kalfadhi
Kaddib muddo bilo ah oo ay xildhibaannadu ku maqnaayeen fasaxa kalfadhigii saddexaad maanta ayaa dib loo furayaa kalfadhiga afaraad. Golaha Shacabka ayaa galay fasaxa kalfadhigii saddexaad 28-kii bishii Meey. Halka Aqalka Sara-na uu fasaxa sharci ah galay 10-kii bishii Luulyo.
Fasaxa baarlamaanka: Sababta Xildhibaannadu Aysan dib ugu noqon deegaannada laga soo doortay
Kalfadhiga afaraad waxaa horyaalla mudanayasha baarlamaanka 10-aad arrimo muhiim ah ay qabyo uga tageen kalfadhigi saddexaad.
Xildhibaan Dr Cabdi Casiis Dhegaqool oo ka mid ah guddiga dhaqaalaha iyo warshadaha ee Golaha Shacabka ayaa u sheegay warbaahinta Kalfadhi in muhiimadda ay saari doonaan billawga kalfadhiga afaraad sameynta xeer-hoosaadka Golaha Shacabka oo laga sugayo guddiga xeer-hoosaadka iyo anshaxa iyo xeer-ka shirkadaha oo laga sugayo guddiga dhaqaalaha iyo warshadaha.
Waxa sidoo kale uu sheegay in ay rejeynayaan in kalfadhigaan uusan noqon kii hore oo kale, isla markaana shuruucdii horay u baaqatay ay hadda dhammeystiraan.
Xildhibaan Sharmaarke Gataad Saleebaan oo ka mid ah habdhowr-ka Golaha Shacabka oo isna la hadlay warhaabinta Kalfadhi ayaa sheegay in qorshaha koowaad ee ay leeyihin uu yahay xeer-hoosaadka Golaha Shacabka oo muddo sanad ah ay dib u eegis ku wadeen. Sidoo kale dhawr iyo toban xeer buu sheegay in ay horyaallaan kalfadhigaan.
Waxa uu sheegay hab-dhowre Sharmaarke in markii ugu horreysay ay ajandayaasha ay hayaan ay ku jiri doonto dib u eegis lagu sameeyay dastuurka dalka oo shan cutub oo ka mid ah ay kazoo dhammaadeen guddiyada loo xilsaaray.
Kalfadhiga afaraad ee Baarlamaanka 10-aad waxaa horyaalla mudanaaysha xeerar ay tahay in muhiimad ay siiyaan xildhibaannada, kuwaas oo gaaraya ilaa 11 xeer oo ay ahayd in la dhammeysito kalfadhigii saddexaad, Waxaana ka mid ah xeerka xaqsiinta ciidanka, dib u dajinta, argagaxisada, xeerka doorashooyinka 2020-ka.
Golaha Shacabka Oo Ku Jira Fasax Saddex Bil Ah
Maqaamka Muqdisho: Aragtiyada Ay Hayaan Guddiga Dastuurka Ee La Xariirta Maqaamka Caasimadda
Kalfadhiga Afaraad Ee Baarlamaanka Oo Furmay Iyadoo Aqalka Sare Aysan Qeyb Ka Aheyn